Ereyada iyo micnaha - Trading - Libertex
Home»Ereyada iyo micnaha - Trading
Ereyada iyo micnaha – Trading
Price dhabta ah waa Quote a at taasoo Company diyaar u yahay si ay u qabtaan Operation Trading a at Point waqti go'an.
Weydii Price waa qiimaha at kaas oo Macmiilka qaban kara Operation Trading ah in IIBKA Instrument ah, waayo, boosteejada Trading kaasoo u ogolaanaya qabashada Hawlaha Trading la Faafidda.
Qofka idman waa qof dabiici ah ama garsoorka si rasmi ah awood u leeyihiin inay maareeyaan ama qabtaan falalka gaar ah.
lacag Available waa wadarta lacagta soo bandhigay qaybta Account Bonus ee Personal Account Management Portal in loo gudbin karaa ka Bonus ah account in Account Trading ka dibna loo isticmaalo si waafaqsan xeerarka adkeeyey Accounts Trading.
Balance waa lacag on Account Trading Client ee marka laga reebo Jagooyinka Open keeni; Equity ee Account Trading ka fiirsada waxa ka dhan Jagooyinka xiran iyo Hawlgallada Non-Trading.
Lacagta Base waa lacagta ah ee Lacagta Labo Xidig a kaas oo la iibsaday ama iibin Lacagta Quote ah (Lacagta counter). Waa in sarreeyaha ee Lacagta Labo Xidig a (lacagta ugu horeysay ee labada).
Bid Price waa qiimaha at kaas oo Macmiilka ka dhigi kartaa macaamil iibiyo (inay iska iibiso Instrument ah), waayo boosteejada Trading kaasoo u ogolaanaya qabashada Hawlaha Trading la Faafidda.
Maalinta Business Waa markii taako ka 06:00 si ay u 15:00 GMT maalin kasta, marka laga reebo maalmaha fasaxa iyo ciidaha. Macluumaadka ugu dambeeyey ee ku saabsan fasaxa iyo ciidaha la daabacay on shirkadda Website. Waxaa lagu wareejiyay kartaa 1 saac inta lagu jiro xagaaga iyo jiilaalka wareejin waqtiga.
CFD Instrument waa aalad oo Trading Operation la sameeynayo iyo ka kaas oo ku salaysan yahay qaar ka mid ah hantida ku lammaan. Hantida An ku lammaan waxaa ka mid ah saamiyada, badeecooyin, indices, mustaqbalkooda iyo sidoo kale waxyaabaha kale, qodobada iyo xaaladaha sida ay liiska la ansixiyey by shirkadda. Macluumaadka ku saabsan tirada CFD qalabku la daabacay on Website Company iyo dhigay on server ganacsiga ay. macluumaad server Trading ee ku adkaan doonnaa haddii ay dhacdo waxaa jira isdhaaf ah wax.
Balance Clear of Funds - heli karo lacag ka bixitaanka oo Client uusan isticmaalin hawlaha Trading. Inta ay Clear Balance of Funds waxaa loo xisaabiyaa by Company sidii xeerarka aasaasay shirkadda. Macluumaadka ku saabsan qadarka Clear Balance of Funds lagu qeexay karaa Personal Account Management Portal iyo ama Trading Terminal.
Client waa qof dabiici ah ama garsoorka gala heshiis la Company iyo ayaaba Hawlgallada Trading-dhismeedka Heshiiska iyo Lifaaqyada ay.
Account Client ee waa account gaar ah ee Management Account Personal Portal furay by Company ee lagu hayo lacag Client iyo qabashada Hawlaha Trading.
Sida Wacan ee u xiran yihiin waa natiijada fulinta qaybta labaad ee ugu Safar Round (Operation Trading ee ku dhow meel).
Account Company ee waa account hadda Company ee hay'ad maaliyadeed, xisaab (jeebka) in nidaamka lacag bixinta ee elektorooniga iyo sidoo kale xisaab kale oo ay ku jiraan xisaabaadka Wakiilada Bixinta.
Lacagta counter (Lacagta quote) waa lacag ah kaasoo loo isticmaalo iibsashada iyo iibinta Base Lacagta. In a Lacagta Lacagta Labo Xidig Counter ka wakiil yahay hooseeyaha a (mid labaad ee Lacagta Labo Xidig a).
lacagta Labo Xidig (Forex) waa laba lacagaha (Base Lacagta iyo Counter Lacagta) taas oo ka qayb Operation Trading ah alaabtii lacagta. Macluumaadka ku saabsan tirada lammaane Lacagta waxaa wakiil on Website Company iyo dhigay on server ganacsiga ay. macluumaad server Trading ee ku adkaan doonnaa haddii ay dhacdo waxaa jira isdhaaf ah wax.
dealer waa shaqaale Company a awood u leeyihiin inay Quotes gobolka, socdo saxnaanta Hawlgallada Trading of Macaamiisha ee, xamili cabasho una sharax xaaladaha ganacsiga la xiriira Hawlgallada qabashada Trading in xisaabaha Macaamiisha '.
Equity waa qiyaasta a miisaan leh ee kharashka miisaaniyadda on Account Trading taas oo ka dhigan qadar lacag on Account Trading oo ay ku jiraan faa'iido xaqiiqsan (khasaare).
dhacayo waa dhicitaanka of CFD Instrument, Joojinta qaban Hawlgallada Trading leh Hantida dahsoon hadda oo laga bilaabo Hawlgallada Trading a qabashada la midka xiga. taariikhaha uu dhacayo kasta CFD Instrument ku hagaagaan by Company ee iskeed oo ku qeexan yihiin ku Company ee Website-ka iyo dhigay on server ganacsiga ay. macluumaad server Trading ee ku adkaan doonnaa haddii ay dhacdo waxaa jira isdhaaf ah wax.
Account Client Dibadda ee waa account ah ee hadda ka jirta hay'ad maaliyadeed, xisaab (jeebka) in nidaamka lacag bixinta ee elektorooniga.
Go'an Fulinta Price (Marka uu codsi ka) waa nooc ka mid ah fulinta Hawlaha Trading markii Client waxaa marka hore la siiyaa xigashooyin si toos ah qabashada Trading Operation ka dibna uu isagu ama iyadu uu xaqiijiyay inuu iyada doonayo si ay u qabtaan Operation Trading ah adigoo gujinaya qiimo in Terminal Trading ah. Ka dib markii riixaya at qiimaha Operation Trading waxaa sidoo kale xaqiijiyay on server shirkadda ama Client la bixiyey si aad u codsato xigashooyin ee mar qabashada Trading Operation.
Funds noqoshada waa bixitaanka lacagaha ka Account Trading Client iyo ay u gudbaayo faahfaahinta bangiga iyada ama ama in ay faahfaahin bangiyada of Client ah ee Qofka Idman tilmaamay in isaga ama iyada codsiga bixitaanka.
Faraqa waa wax isbedel ah oo qiimo marka Quote soo socda ka duwan mid ka mid ah la soo dhaafay by dhowr ah (tobanaan) of Liiska Forbes.
kaabiga u (quful) waa adigoo laba Jagooyinka Open for Instrument isla hal meel waa mid dheer oo kale waa la soo gaabiyey.
margin Bilowga (Shuruudaha margin) waa rahaamad in loo baahan yahay in la furo meel. Shuruudaha margin for Instrument kasta loo cayimay doonaa Website Company iyo dhigay on server ganacsiga ay. macluumaad server Trading ee ku adkaan doonnaa haddii ay dhacdo waxaa jira isdhaaf ah wax.
Fulinta Instant waa nooc ka mid ah fulinta Hawlaha Trading markii Macmiilka uu rabo inuu sameeyo Operation Trading ah adigoo gujinaya qiimo in Terminal Trading ah. Haddii qiimaha weli waa dhabta ah Operation Trading la xaqiijiyay. Haddii Quote ah ee Trading Terminal aan dhabta ah wax ka badan Macmiilka waxaa la siiyaa qiimaha cusub ee fulinta Trading Operation. dalab si ay u qabtaan Operation Trading a at qiimaha cusub waa ansax tahay muddo waqti Limited. Client ku heshiin doonaan in ay suurto gal dil Operation Trading a at kasta oo Price dhabta ah ee server Company ee waa isku day Client ee si ay u qabtaan Operation Trading ah si joogta ah (aan ka yarayn 2 (laba) isku day oo xiriir ah) la diiday by server ka Company ee ay sabab u tahay isbedelka of Price ee dhabta ah ee server.
qalab Financial waa Spot Instrument iyo (ama) CFD Instrument. Macluumaadka ku saabsan tirada qalabku waxaa wakiil on Website Company iyo dhigay on server ganacsiga ay. macluumaad server Trading ee ku adkaan doonnaa haddii ay dhacdo waxaa jira isdhaaf ah wax.
marsiin waa saamiga u dhexeeya mugga of Operation Trading iyo xaddiga margin Bilowga.
Yaree (qaado Faa'iido) waxaa nooc ka mid ah oo loo xilsaaray in ay Order ah in kiiska Order noocaas ah ayaa lagu wadaa in ay iska iibiso qiimo (heerka) taas oo uu ka badan yahay heerka suuqa ee hadda ama si ay u iibsadaan at qiimaha (heerka) taas oo ka hooseeya heerka suuqa ee hadda. Ujeedada ugu weyn ee Xaddid Amarada waa in la damaanad qaado a dil Trading Operation qiimo aan ka xun mid ku qeexan Amarka.
Log File waa qayb ka mid ah Terminal Trading iyo (ama) Maamulka Account Personal Portal loogu talagalay qamaar (wax lagu qoro) xogta wareejiyo by dhinacyada midba midka kale inta lagu guda jiro fulinta Heshiiskii via Terminal Trading iyo (ama) Maamulka Account Personal Portal. helitaanka kasta oo xisbiga Heshiiska Terminal Trading ama Management Account Personal Portal la hagaajin doonaa File Log iyo labalaabka on server shirkadda. The server cayimay ayaa ah isha ugu weyn ee macluumaadka iyo aqbalay by Shirkadaha ahayn iyagoo xujooyin ah ee case of baadhaya xaaladaha disputable xiran fulinta heshiiskan. Macluumaadka laga File Log ah Server ah Company ayaa waxay yeelanayaan mudnaan buuxda ka badan doodaha kale markii la tixgelinayo xaalad disputable oo ay ku jiraan ee la xiriirta warbixinta ka File Log of Client ee Trading Terminal iyo (ama) Maamulka Account Personal Portal. Shirkadda waxay xaq u ma si uu u xaliyo xaqiiqda ah ee ay helaan xisbiga Heshiiska u Trading Terminal ama Portal Personal Management Account ee File Log ah.
Jago Long waxaa iibsan Instrument ah ee rajaynaya in ay qiimaha (qiimaha) kici doonaa.
Luudh waa mugga caadiga ah ee Instrument ah ee la xiriirta oo Operation Trading la sameeyay. Mid ka mid ah Trading Operation la qaban karaa dhowr saami ama cawradooda. The tirada badan for Instrument kasta iyo nooca Trading Terminal lagu qeexay doonaa Website Company iyo dhigay on server ganacsiga ay. macluumaad server Trading ee ku adkaan doonnaa haddii ay dhacdo waxaa jira isdhaaf ah wax.
Heerka margin (Heerka Equity) waa saamiga u dhexeeya Equity iyo xuduud loo baahan yahay, ka muujiyay marka loo eego boqolkiiba.
margin loo baahan yahay (Funds Reserved, margin) waa lacag hor istaagay in Trading Account Client ah si ay u ilaaliyaan oo dhan (iyada) Jagooyinka Open. Margin Shuruudaha loo baahan yahay in ay fur Jagooyinka for Instrument kasta waxa lagu cayimay on Website Company iyo dhigay on server ganacsiga ay. macluumaad server Trading ee ku adkaan doonnaa haddii ay dhacdo waxaa jira isdhaaf ah wax.
Fulinta suuqa (Price dhabta ah) waa nooc ka mid ah fulinta Hawlaha Trading markii Macmiilka uu rabo inuu sameeyo Trading Operation a isagoo ku heshiiyeen ka hor in Operation Trading ah waa la dili doonaa qiimo taas oo ah dhabta ah ee server shirkadda (aan bixiya Quotes cusub).
Mid Price waa qiimo u dhaxeeya Bid iyo Weydii Qiimaha at kaas oo Client ah ku qaban kara Operation Trading ah ee boosteejada Trading kaasoo u ogolaanaya qabashada Hawlaha Trading aan Faafidda.
Faafiye waa saamiga u dhexeeya ganacsiga isbedelka boqolkiiba lacagta ee terminal Libertex iyo qiimaha hantida ku lammaan, Lacagta Base isbedelka qiimaha boqolleyda. Macluumaadka ugu dambeeyey ee ku saabsan tirada ugu badan ee loo laablaabi, waayo Instrument kasta waxaa la daabacay on the Company ee Website-ka iyo dhigay on server ganacsiga ay. macluumaad server Trading ee ku adkaan doonnaa haddii ay dhacdo waxaa jira isdhaaf ah wax.
Operation Non-Trading waa qaliin lacag kala iibsiga iyo (ama) qoraal ahaan lacagaha ka Account Trading Client ah iyo sidoo kale ma Hawlgallada kale si toos ah ula a fulinta Hawlaha Trading xiran.
Jago Open waa qadar ah Instrument ka iibsaday (ama iibin), aan hoos sale ka soo horjeeda (gadashada) of Instrument la mid ah tiro la mid ah iyo (ama) mugga; natiijada fulinta qaybta hore ee ganacsiga wareega safar (Hawlgallada Trading ee furitaanka booska). Sidaas darteed of furitaanka meel Client uu leeyahay mas'uuliyad in a) qabtaan Operation ah Trading lid ku dhow booska uu ka qiime isku mid; b) ilaaliyaan Heerka margin aan ka yarayn hal dhisay by Company ah (waayo boosteejada isticmaalaya arinkii).
Order (Inta laga Order, Yaree, heerka) waa Order shuruud Client ah si ay u qabtaan Operation Trading haddii shuruudaha, dhigay by Client ee Macmiilka ee Trading Terminal la buuxiyo; waxaa maldahan in Order noocaas ah waa la dili doonaa waqti aan la cayimin mustaqbalka iyadoo la raacayo nidaamka Amarrada fulinta ku tilmaamay by lifaaqyada in heshiiskan. noocyada Order Available ku xiran Terminal Trading ah by Client la doortay.
Point (PIP) waa mid ka mid ah qaybta ugu yar weyn Quote taas oo ah 0,0001 ama 0,01 ku xiran tahay Instrument ah. Isbeddel of Quote ah 1 (mid ka mid ah) unit of category ka yar macnaheedu waxa weeye isbedel ah 1 (mid ka mid ah) PIP.
Price Feed waa taxane Quotes diray Trading Terminal oo ay ku jiraan oo dhan Quotes ay bixiso shirkadda in Macaamiisha ku dul codsiyada iyo dhammaan qiimaha Hawlgallada Trading dhab sameeyay.
Lacagta quote (Lacagta counter) waa lacag ah oo qiimo of Instrument la denominated. In a Lacagta Lacagta Labo Xidig Counter ka wakiil yahay hooseeyaha a.
quote waa qiimo at kaas oo Operation Trading la Instrument ah a la fulin karaa.
Mode quote (dil Type) waa hab farsamo helo (rumayn) qiimaha hadda iyo samaynta ganacsi by Macmiilka. Hababka Quote Available kala duwan taas oo ku xidhan nooca boosteejada Trading iyo qalabku waxay ka kooban yihiin oo ku qeexan yihiin ee Lifaaqyada baahisey in heshiiskan.
xaqiiqsadeen (go'an) Result Financial waa Result a Financial on Saffarada Round. Result Financial xun ku Saffarada Round waa Client ee ay guuldarada, mid wanaagsan oo waa u faa'iido ah.
Trip Round waa isku darka laba Hawlgallada Trading ka gees leh mug isku mid (furitaanka meel ay xiritaanka xiga): iibsato la iibiyo ku xiga ama iibinta gadashada xiga ee ku saabsan booska la Ticket isla (ID).
Jago gaaban iibinaysa ee Instrument mid Rajayn in ay qiimaha (qiimaha) dhaadhici doonnaa.
Spot qalabku waa laba nooc, Lacagta iyo macdanaha oo ka qayb Hawlgallada Trading sida ku cad shuruucda suuqa barta. Liiska Spot qalabku loo isticmaalo by Company ee waxaa loo cayimay on Website Company iyo on server ganacsiga ay. macluumaad server Trading ee ku adkaan doonnaa haddii ay dhacdo waxaa jira isdhaaf ah wax.
faafidda waa faraqa u dhexeeya Weydii Price iyo Bid Price of Instrument ah, muujiyeen in Liiska Forbes. Faafidda kala duwanaan karaan ku xiran tahay xaaladda suuqa.
Stop Loss waxaa nooc ka mid ah loo qoondeeyey Order Client ee kiiska haddii Order noocaas ah ayaa lagu wadaa in ay iska iibiso qiimo (heerka) taas oo ka hooseeya heerka suuqa ee hadda ama si ay u iibsadaan qiimo (heerka) taas oo uu ka badan yahay heerka suuqa ee hadda. Ujeedada ugu weyn ee ku amartay in Stop waa in ay sameeyaan Operation Trading a at qiimaha suuqa ee hadda ka dib markii qiimaha Order ee la gaaro by qiimaha Instrument ah ee.
Jooji-Out waa xiritaanka khasab ah jagooyinka Client ee qiimaha suuqa ee hadda marka Level oo la aqbali karo khasaaraha la gaaro. Rules of xiritaanka khasab ah jagooyinka Client ee kala duwanaan karaan ku xiran tahay Trading ee Terminal loo isticmaalo iyo waxa lagu sharaxay Lifaaqyada in hoosaadka Hawlaha Trading.
Heerka Jooji-Out waa qadar khasaaraha on Jago ee Open (jagooyinka) of Client muujiyay sida boqolkiiba taas oo ah in ay dhacdo gaarey kiciya xiritaanka khasab ah ee Jago ee (jagooyinka) by Company ee qiimaha dhabta ah iyada oo aan ogeysiin ah oo ka hor of Macmiilka. Heerarka Jooji-Out kasta Trading Terminal ku qeexan yihiin on Website Company iyo fadhiisiyo Server shirkadda. In case of iswaafaqla'aan wixii macluumaad ah ee ku qeexan on Server shirkadda adkaan doonaan.
isku bedelasho waa ka olaleeyan ah Jago ah Open of Client ah in maalinta ku xigta. The Order iyo shuruudaha isku bedelasho ku hagaagaan by Company ee nooc kasta oo Terminal Trading ah.
sax waa isbedel yar ee qiimaha Instrument ah. qiimaha gaarka ah ee muqleeyaha ah kulli weelasha lagu daabacay on Website Company iyo dhigay on server ganacsiga ay. macluumaad server Trading ee ku adkaan doonnaa haddii ay dhacdo waxaa jira isdhaaf ah wax.
Ticket (ID) waa lambarka aqoonsiga gaar ah in shirkadda xaq u leeyahay inuu u yeelaan kasta meel la furay ama lagama gaarin Order of Client ah ee Terminal Trading ah.
Account Trading waa Account Client gaar ah ee nidaamka diiwaan haynta of Company loo isticmaalo ag ilaalinta track ka mid ah dhammaan natiijooyinka Hawlgallada Non-Trading ah, natiijada ganacsiga, Jagooyinka Open, Amarrada iyo tallaabooyin kale oo codsiyada of Client ah in la rabay by Heshiiskan iyo Lifaaqyada ay.
Maalinta Trading Waa markii taako ka 21:00:00 si ay u 20:59:59 (GMT), marka laga reebo maalmaha fasaxa iyo ciidaha. waqtiga furitaanka iyo xidhitaanka ee Day Trading lagu wareejiyay kartaa 1 saac inta lagu jiro xagaaga iyo jiilaalka kala guurka waqti. Macluumaadka ugu dambeeyey ee ku saabsan fasaxa iyo ciidaha waxaa wakiil on Website Company iyo dhigay on server ganacsiga ay. macluumaad server Trading ee ku adkaan doonnaa haddii ay dhacdo waxaa jira isdhaaf ah wax.
Saacadaha Trading waa taako waqtiga lagu jiro taas oo Hawlgallada Trading dil ama Order meelaynta Instrument ah waxaa suurto gal ah. bareeg Trading for Instrument kasta waxaa loo cayimay on Website Company iyo dhigay on server ganacsiga ay. macluumaad server Trading ee ku adkaan doonnaa haddii ay dhacdo waxaa jira isdhaaf ah wax. Inta lagu guda jiro Saacadaha Non-Trading Hawlgallada Trading dil iyo Order meelaynta (beddelka) waa wax aan macquul aheyn.
Operation Trading waxaa howlgal alaabtii dhaqaale diinta ka badan-the-counter sameeyaa dhexeeya Client ah iyo Company in hab non-deliverable, i.e. qalliin oo tilmaamayo gadidda ama iibinta qalabka ah, halkaas oo shuruudaha «iibsan» ama «iibiyay» waxaa loo tixgeliyaa marka la eego farsamada sida ma jiraan wax iibsiga ee lahaanshaha Instrument ah. Hawlgallada Trading waxaa loo qabtaa goobta Company ee.
Trading Volume Operation waa qadar ah Instrument ah oo la iibin ama la iibsaday badan, cutub oo cabbirka of Instrument u dhigma ama xaddiga ganacsi ee lacagta ah ee Balance a (iyadoo ku xiran terminal isticmaalo Trading).
Trading Terminal waa software khaas ah iyo hardware, kaas oo awood u Client ah in ay ku heshiiyaan la Shirkadda via shabakadda caalamiga ah ee computer ku saabsan shuruudaha iyo xaaladaha Hawlgallada Trading toogasho qaabka guud ee heshiiskan iyo sidoo kale si ay u qoraan shuruudaha iyo xaaladaha ansixiyey weyn, dhigay oo la joojiyay Amarada. Trading Terminal wuxuu kuu ogol yahay si ay u helaan macluumaad dhaqaale ka suuqyada maaliyadeed ee caalamiga ah, tilmaamaha soo dir Company iyo xaqiijinta iyo warar ka soo Company ka helaan. Trading waxay bixiyaan Terminalshall aqoonsiga ee dhinacyada (sugida ee dhinacyada) in fariimaha sarrifka iyo sidoo kale arimaha sirta ah iyo daacad ah fariimaha la kaashanayo qalabka dhisay-ilaalinta cryptographic. The nooc software iyo hardware ku qeexan waxaa ka mid ah macluumaadka iyo ganacsiga Libertex madal iyo sidoo kale nidaamyada kale ee lagula talinayaa isticmaalka by Company iyadoo ujeedada tahay fulinta heshiiskii.
Hantida dahsoon waa hanti taas oo ah in salka Instrument ah iyo kaas oo la iibsaday ama iibin halka qabashada Hawlaha Trading. Oo salka ku Hantida matali karaan by lacagta (Lacagta Base), kaydka, badeecooyin, indices, mustaqbalkooda iyo sidoo kale waxyaabaha kale, qodobada iyo xaaladaha sida ay liiska la ansixiyey by shirkadda.
xaqiiqsan (sabayn, hadda Jira) Result Financial(Sabayn Faa'iido / Loss) waa Result a dhaqaale ee Jagooyinka Open at qiimaha hadda qalabku ku. Result Financial xun, waayo, Jagooyinka Open waa Loss sabayn, mid fiican waa Faa'iido sabayn.
Noqosho Type waa mid ka mid ah noocyada kala duwan ee Funds noqoshada siiyo Client ah in isaga ama iyada Personal Account Management Portal.
Waraysi Head of Department Product ah - LIBERTEX
Trading Libertex madal